Epinephrine (အပီနပ်ဖရင်း ) - Hello Sayarwon
Epinephrine (အပီနပ်ဖရင်း )
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Epinephrine (အပီနပ်ဖရင်း )
Epinephrine (အပီနပ်ဖရင်း ) ကဘာလဲ။
Generic Name: Epinephrine (အပီနပ်ဖရင်း ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Epinephrine (အပီနပ်ဖရင်း ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Epinephrine အား အင်းဆက်ကောင်များတုပ်ခြင်း/ကိုက်ခြင်း၊ အစားအစာ၊ ဆေးများနှင့် တခြားအရာများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပြင်းထန်သောဓါတ်မတည့်မှုများ၏ အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် အသုံးများပါသည်။ Epinephrine သည် အသက်ရှူခက်ခြင်းကို မြန်မြန်ကောင်းစေပြီး နှလုံးအားလှုံဆော်ခြင်း၊ သွေးပေါင်မြန်မြန်ပြန်တက်စေခြင်း၊ အင်ပျဉ်များကို ပျောက်စေခြင်းနှင့် မျက်နှာ နှုတ်ခမ်းနှင့် လည်ချောင်း ရောင်ရမ်းခြင်းများကိုလျော့ချခြင်းများကို မြန်မြန်သက်သာစေ၏။ Epinephrine ထိုးဆေးအား ယခုစာတမ်းတွင်မဖော်ပြထားသည့် အခြေအနေများတွင်လဲ အသုံးပြုနိုင်ပါသေးသည်။
Epinephrine (အပီနပ်ဖရင်း ) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Epinephrine ၏မတူညီသော brand များတွင် ဆေးထိုးစက်များသုံးခြင်း ပြင်ဆင်ခြင်းများ၌ တူညီမည်မဟုတ်ပါ။ Epinephrine ကိုသင့်တော်စွာ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ထိုးနိုင်ရန် သေချာလေ့လာပါ။ ထိုမှသာ အသုံးလိုလာလျှင် ထိုးနိုင်ဖို့ရာ ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ပြုစုပေးသူ သို့ မိသားစုဝင်များကို သင်ကိုယ်တိုင်ဆေးမထိုးနိုင်သည့်အခါ ထိုးနိုင်ရန်အတွက် သင်ပေးထားပါ။ Epinephrine ဆေးကိုမသုံးခင်နှင့် သုံးမည့်အခါတိုင်း သင်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်မှပေးထားသော လူနာအကြောင်းအရာမှတ်တမ်းစာရွက်လေးအား ဖတ်ပါ။ မေးစရာများရှိလာပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Epinephrine ၏ အာနိသင်သက်ရောက်မှုမှာ မြန်သော်လည်း မကြာတတ်ပါ။ Epinephrine ထိုးပြီးပါက ချက်ချင်း ဆေးပညာအကူအညီရယူပါ။ ဆေးပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အား ကိုယ့်ကိုယ်ကို Epinephrine ထိုးထားကြောင့် ပြောပါ။ ပေါင်မှလွဲ၍ တခြားသောနေရာများ သို့မဟုတ် လက်များကို Epinephrine ထိုးမိခြင်းမဖြစ်စေရန် ရှောင်ပါ။ ထိုးမိပါက ဆေးပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အား ချက်ချင်းပြောပါ။ ဆေးထိုးပြွန်များကို သေချာစွန့်ပစ်ပါ။ ထုတ်ကုန်တွင်ပါသော ဆေးရည်များသည် ကြည်လင်နေရပါမည်။ အမှုန်များပါမပါ၊ အရောင်ပြောင်းချင်းရှိမရှိသေချာစေရန် ထုတ်ကုန်ကို သေချာစစ်ဆေးပါ။ အရည်နောက်နေလျှင် ပန်းရောင် အညိုရောင်ပြောင်းနေလျှင် မသုံပါနှင့်။ အသစ်ထပ်ဝယ်ပါ။
Epinephrine (အပီနပ်ဖရင်း ) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
ဆေးအား သင်နှင့်အနီးဆုံးနေရာတွင် အချိန်ပြည့်ထားထားပါ။ [ယေဘူယျ အသိပေးချက် – ဆေးအများစုမှာ အခန်းအပူချိန်တွင် သိုလှောင်ထားနိုင်ပါတယ်)
Epinephrine ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Epinephrine ကို ရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Epinephrine ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။)
Epinephrine အား အိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချတာမျိုးအား မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကိုမလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့်အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ရာ အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Epinephrine အားရေခဲသေတ္တာထဲ၌ သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်သောကြောင့် အေးခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Epinephrine (အပီနပ်ဖရင်း ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Epinephrine မထိုးခင် ဆေးနှင့်မတည့်ခြင်း၊ တခြား Epinephrine များ၊ Sulfites သို့ Epinephrine တွင်ပါဝင်သည့် ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် မတည့်ခြင်းမျိုး ရှိပါက ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုပြောပါ။ ဤဆေးသည် အသက်ကယ်ဆေးဖြစ်သောကြောင့် ဆေးတွင်ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းတစ်ခုခုနှင့် မတည့်ပါဆိုလျှင်တောင်မှ သုံးရန် ဆရာဝန်မှ လမ်းညွှန်ကောင်း လမ်းညွှန်နိုင်ပါသည်။ Epinephrine အလိုအလျောက်ထိုးသောစက်များတွင် လေးတက်စ် (Latex) မပါဝင်သောကြောင့် သင့်၌ လေးတက်စ်အလက်ဂျီရှိလျှင် စိတ်ချစွာသုံနိုင်ပါသည်။
ညွှန်ကြား၍သောက်သည်ဖြစ်စေ မညွှန်ကြားပဲသောက်သည်ဖြစ်စေ ဆေးများ ဗီတာမင်များ သုံးနေပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုပြောပါ။ အောက်ပါတို့သုံးနေလျှင် ပြောဖြစ်အောင် ပြောရပါမည်။ amitriptyline (Elvil) ကဲ့သို့ တချို့သော စိတ်ကျရောဂါကုဆေးများ၊ desipramine (Norpramin), doxepin (Silenor), imipramine (Tofranil), maprotiline, mirtazapine (Remeron), nortriptyline (Pamelor), protriptyline (Vivactil), and trimipramine (Surmontil); antihistamines such as chlorpheniramine (ဘာမီတွန်) နှင့် diphenhydramine (Benadryl); beta blockers များ – propranolol (Inderal); digoxin (Digitek, Lanoxicaps, Lanoxin); diuretics – ဆီးဆေးများ (‘water pills’); ergot medications – dihydroergotamine (D.H.E. 45, Migranal), ergoloid mesylates (Hydergine), ergonovine (Ergotrate), ergotamine (in Cafergot, in Migergot), methylergonovine (Methergine), နှင့် methysergide (Sansert); levothyroxine (Levothroid, Levoxyl, Synthroid, Unithroid); နှင့် quinidine တို့ကဲ့သို့ နှလုံးခုန်မမှန်ရာတွင် သုံးသောဆေးများ။. monoamine oxidase inhibitor ဥပမာ isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar), and tranylcypromine (Parnate) များသုံးနေလျှင် သို့မဟုတ် ပြီးခဲ့သော ၁၄ ရက်အတွင်းရပ်ထားလျှင် ဆရာဝန်အားပြောပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိမရှိသိစေရန် ဆရာဝန်မှ သင့်အား သေချာဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်ရန် လိုကောင်းလိုနိုင်ပါသည်။
သင့်၌ အောက်ပါတို့ ရှိလျှင်သို့ ရှိခဲ့ဖူးလျှင်ပြောပါ။ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ သွေးတိုး သို့ တခြားနှလုံးရောဂါများ၊ ဆီးချို၊ hyperthyroidism (သိုင်းရွိုက်ဂလင်းအလွန်တက်ကြွခြင်း) စိတ်ကျခြင်းနှင့် တခြားသော စိတ်ရောဂါများ သို့မဟုတ် ပါကင်စွန်ရောဂါ။ Twinject ဆေးထိုးစက်အားအသုံးပြုမည်ဆိုပါက အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း လက်လှုပ်ရှားရခက်ခြင်းမျိုးရှိလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
သင့်၌ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် နို့တိုက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဆေးသုံးသင့်မသင့်ကို ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Epinephrine (အပီနပ်ဖရင်း ) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။]
Epinephrine (အပီနပ်ဖရင်း ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Epinephrine အား ပထမတစ်ခါသုံးစဉ်က ပြင်းထန်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သော အသက်ရှူရခက်လာခြင်း သို့ အန္တရာယ်ဖြစ်လောက်သည်အထိ သွေးပေါင်တက်ခြင်း (ခေါင်အလွန်ကိုက်ခြင်း၊ အမြင်ေဝဝါးခြင်း၊ နားတွင် တစီစီမြည်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ အသိစိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ တက်ခြင်း) စသည်တို့ဖြစ်ထားပါက ဒုတိယအကြိမ်မသုံးမှိ ဆရာဝန်နှင့်အရင်တိုင်ပင်ပါ။
မပြင်းထန်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် – ချွေးထွက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ အရေပြားဖြူဖျော့ခြင်း၊ အသက်ရှူမဝသလိုခံစားရခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ အားနည်းခြင်း သို့ လက်တုန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း သို့ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း တို့ပါဝင်သည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Epinephrine (အပီနပ်ဖရင်း ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Epinephrine သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့်တခြားသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သော ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများ မဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံး၏စာရင်းကိုပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Epinephrine (အပီနပ်ဖရင်း ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
(ယေဘူယျအသိပေးချက် – Epinephrineက အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။)
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Epinephrine (အပီနပ်ဖရင်း ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Epinephrineသည် သင်၏ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအား ပိုဆိုးသွားစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီး၏။ အထူးသဖြင့် အောက်ပါတို့တွင် ပိုအရေးကြီးသည်။
-အမျိုးအစား ၂ ဆီးချို
-သိုင်းရွိုက်ဂလင်း အလွန်တက်ကြွသည့်ရောဂါ – Epinephrine သည် ရောဂါအခြေအနေကို ပိုဆိုးစေနိုင်သည်။
သွားနှင့်သွားဖုံးခွဲစိတ်ခြင်း – သွားနှင့်သွားဖုံးခွဲစိတ်ရာတွင် Epinephrine အား လိမ်းဆေး သို့ ထိုးဆေးပုံစံဖြင့် သုံးထားနိုင်သည်။ ophthalmic epinephrine အား ထိုအချိန်တွင်သုံးခြင်းဖြင့် ဆေးများ၏သွေးတွင်းလယ်ဗယ်ကို မြင့်တက်စေပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရနိုင်ချေ ပိုများနိုင်ပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Epinephrine (အပီနပ်ဖရင်း ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သွေးလန့်ခြင်းအတွက် လူကြီးသုံးရန် ပုံမှန်ပမာဏ
အကြောဆေး – ၂ မှ ၁၀ မိုက်ခရိုဂရမ် (၁မီလီဂရမ်အား ၂၅၀ မီလီလီတာ D5W နှင့်ဖျော်ပါ သို့ တစ်မီလီလီတာလျှင် ၄ မိုက်ခရိုဂရမ်နှုန်းကျဖျော်ပါ)။ သင့်တော်သည့် နှလုံးခုန်နှုန်း နှင့် သွေပေါင်ရရှိစေရန် လိုအပ်သလို တိုးနိုင်ပါသည်။ တစ်မိနစ်လျှင် ၂၀ မိုက်ခရိုဂရမ်ထိုးရန် လိုအပ်သည်မှာ ရှားပါသည်။
လေပြွှန်မှရှူရန် – တစ်မီလီဂရမ် (၁:၁၀၀၀၀ နှုန်းဖျော်ထားသည့်မှ ၁၀ မီလီလီတာ) တစ်ကြိမ် ပြီးနောက် ခပ်မြန်မြန် ၅ ကြိမ် ရှူရှိုက်ရမည်။
နှလုံးတိုက်ရိုက်သွင်းခြင်း – ဝ.၃ မှ ဝ.၅ မီလီဂရမ် (၁:၁၀၀၀၀ ဖျော်ရည်မှ ၅ မှ ၁၀ မီလီလီတာ) အား ဘယ်ဖက်သွေးလွှတ်ခန်းသို့ တိုက်ရိုက်ထိုးခြင်း
Asystole (နှလုံးမခုန်တော့ခြင်း) အတွက် လူကြီးသုံးရန် ပုံမှန်ပမာဏ
အကြောဆေး – ဝ.၅ မှ ၁ မီလီဂရမ် (၁:၁၀၀၀၀ ဖျော်ရည်မှ ၅ မှ ၁၀ မီလီလီတာ) တစ်ကြိမ်ထိုးပါ။ လိုအပ်လျှင် ၃ မိနစ်မှ ၅ မိနစ်ခြားပြီး ထပ်ထိုးနိုင်သည်။ ၁ မိလီဂရမ်အား တုန့်ပြန်မှုမလုံလောက်လျှင် ဆေးပမာဏအား ၃ မိနစ်မှ ၅ မိနစ်ကြာတိုင်း တိုးမြှင့်ပါ ( ၂မှ ၅ မီလီဂရမ်ထိ) ၁ မီလီဂရမ်၊ ၃ ပြီးနောက် ၃ မိနစ်ကြာတိုင်း ၅ မီလီဂရမ်ထိုးပါ။ သို့မဟုတ် တစ်ကီလိုဂရမ်လျှင် ဝ.၁မီလီဂရမ်နှုန်းကျအား ၃ မိနစ် မှ ၅ မိနစ်ခြားတစ်ခါသုံးပါ။
လေပြွန်ရှူဆေး – တစ်မီလီဂရမ် (၁:၁၀၀၀၀ နှုန်းဖျော်ထားသည့်မှ ၁၀ မီလီလီတာ) တစ်ကြိမ် ပြီးနောက် ခပ်မြန်မြန် ၅ ကြိမ် ရှူရှိုက်ရမည်။
Electromechanical Dissociation (နှလုံးလျှပ်စစ်ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း) အတွက် လူကြီးသုံးရန် ပုံမှန်ပမာဏ
အကြောဆေး – ဝ.၅ မှ ၁ မီလီဂရမ် (၁:၁၀၀၀၀ ဖျော်ရည်မှ ၅ မှ ၁၀ မီလီလီတာ) တစ်ကြိမ်ထိုးပါ။ လိုအပ်လျှင် ၃ မိနစ်မှ ၅ မိနစ်ခြားပြီး ထပ်ထိုးနိုင်သည်။ ၁ မိလီဂရမ်အား တုန့်ပြန်မှုမလုံလောက်လျှင် ဆေးပမာဏအား ၃ မိနစ်မှ ၅ မိနစ်ကြာတိုင်း တိုးမြှင့်ပါ ( ၂မှ ၅ မီလီဂရမ်ထိ) ၁ မီလီဂရမ်၊ ၃ ပြီးနောက် ၃ မိနစ်ကြာတိုင်း ၅ မီလီဂရမ်ထိုးပါ။ သို့မဟုတ် တစ်ကီလိုဂရမ်လျှင် ဝ.၁မီလီဂရမ်နှုန်းကျအား ၃ မှ ၅ မိနစ်ခြားတစ်ခါသုံးပါ။
AV Heart Block (နှလုံးလျှပ်စီးလမ်းကြောင်းပိတ်ခြင်း) အတွက် လူကြီးသုံးရန် ပုံမှန်ပမာဏ
ရုတ်တရတ်ပြင်းထန်သော ပန်းနာရင်ကြပ်အတွက် လူကြီးသုံးရန် ပုံမှန်ပမာဏ
အရေပြားအောက်ထိုးဆေး – ဝ.၁ မှ ဝ.၅ မီလီဂရမ် (၁:၁၀၀၀ ဖျော်ရည်မှ ဝ.၁ – ဝ.၅ မီလီလီတာ) မိနစ် ၂၀ မှ လေးနာရီအထိ လိုအပ်သလို ခြားပြီး ထပ်ထိုးနိုင်သည်။
အရေပြားအောက်ကြာရှည်ခံဆေး – ဝ.၅ မီလီဂရမ် ( ၁:၂၀၀ ကြာရှည်ခံဆေးမှ ဝ.၁ မီလီလီတာ) တစ်ကြိမ်။ ထပ်လောင်းထည့်ရန်ပမာဏအဖြစ် ဝ.၅ မှ ၁ မီလီဂရမ်အထိကို ၆ နာရီအောက်ပိုလျော့မခြားပဲ လိုအပ်သလို ပေးနိုင်ပါသည်။
အသားဆေး – ဝ.၁ မှ ဝ.၅ မီလီဂရမ် (၁:၁၀၀၀ ဖျော်ရည်မှ ဝ.၁ – ဝ.၅ မီလီလီတာ) မိနစ် ၂၀ မှ လေးနာရီအထိ လိုအပ်သလို ခြားပြီး ထပ်ထိုးနိုင်သည်။
ရှူရသော aerosol – ၁၆၀ မှ ၂၂၀ မိုက်ခရိုဂရမ် ( တစ်ခါရှူ) တစ်ကြိမ်။ ထပ်လောင်းရှူနိုင်သည့်အချိန်သည် တစ်မိနစ်ကြာပြီးနောက်မှ ရှူနိုင်မည်။ ထို့နောက်တစ်ခါထပ်သုံးမည့်အချိန်အား အနည်းဆုံး ၃ နာရီခြားသင့်သည်ဟု လမ်းညွှန်ထားပါသည်။
အငွေ့ထုတ်စက်နှင့်ရှူခြင်း – ၁ မှ ၃ကြိမ်ရှူရန် (၁% ၁:၁၀၀ ဖျော်ရည်မှ ၈ မှ ၁၀ စက်) တစ်ခါသာရှူရန်။ ငါးမိနစ်အတွင်း မသက်သာပါက ဆေးကိုထပ်သုံးနိုင်သည်။ နောက်တစ်ခါထပ်သုံးမည့်အချိန်အား အနည်းဆုံး ၃ နာရီခြားသင့်သည်ဟု လမ်းညွှန်ထားပါသည်။
Intermittent positive pressure breathing – ဝ.၃ မီလီဂရမ် (၁:၁၀၀ ဖျော်ရည်မှ ဝ.၀၃ မီလီလီတာ) တစ်ကြိမ်။ ရှူရိုက်ဖို့ရာလက်ခံနိုင်သည့် အနည်းဆုံးပမာဏသည် သက်သာရန်အတွက် သုံးရန်ဆေးပမာဏဖြစ်သည်။ လူနာအများစုသည် ၁၅ မိနစ်အတွင်း သက်သာပါသည်။ ဆေးအား ၃ မှ ၄ နာရီခြားပြီး လိုအပ်သလို ထပ်ထိုးနိုင်ပါသည်။
အဆုတ်ပွခြင်းအတွက် လူကြီးသုံးရန် ပုံမှန်ပမာဏ
အရေပြားအောက်ထိုးဆေး – ဝ.၃ မီလီဂရမ် (၁:၁၀၀၀ ဖျော်ရည်မှ ဝ.၁ – ဝ.၅ မီလီလီတာ) မိနစ် ၂၀ မှ လေးနာရီအထိ လိုအပ်သလို ခြားပြီး ထပ်ထိုးနိုင်သည်။
Intermittent positive pressure breathing – ဝ.၃ မီလီဂရမ် (၁:၁၀၀ ဖျော်ရည်မှ ဝ.၀၃ မီလီလီတာ) တစ်ကြိမ်။ ရှူရိုက်ဖို့ရာလက်ခံနိုင်သည့် အနည်းဆုံးပမာဏသည် သက်သာရန်အတွက် သုံးရန်ဆေးပမာဏဖြစ်သည်။ လူနာအများစုသည် ၁၅ မိနစ်အတွင်း သက်သာပါသည်။ ဆေးအား ၃ မိနစ် မှ ၄ နာရီခြားပြီး လိုအပ်သလို ထပ်ထိုးနိုင်ပါသည်။
အလက်ဂျစ် (ဓါတ်မတည့်မှု)အတွက် လူကြီးသုံးရန် ပုံမှန်ပမာဏ
အကြောဆေး – ဝ.၁ မှ ဝ.၂၅ မီလီဂရမ် (၁:၁၀၀၀၀ ဖျော်ရည်မှ ၁ – ၂.၅ မီလီလီတာ) အား တစ်ကြိမ် ဖြည်းဖြည်းနှင့် သတိထားမိပြီး ၅ မှ ၁၀ မိနစ်ကြာအောင် မျှဉ်းထိုးရမည်။ လိုအပ်လျှင် ၅ မှ ၁၅ မိနစ်ခြားပြီး ထပ်ထိုးနိုင်သည်။ တစ်ချို့သော ပြင်းထန်သည့် Anaphylaxis တွင် အကြောဆေးအားပုလင်းချိတ်သွင်းခြင်း (D5W ၂၅၀ မီလီလီတာတွင် ၁ မီလီဂရမ်ဖျော်ခြင်း သို့ တစ်မီလီလီတာလျှင် ၄ မိုက်ခရိုဂရမ်နှုန်း) အား တစ်မိနစ်လျှင် ၁ မှ ၄ မိုက်ခရိုဂရမ်နှုန်းဖြင့် ချိတ်နိုင်ပါသည်။ (တစ်နာရီလျှင် ၁၅ မှ ၆၀ မီလီလီတာအထိ)
Pupillary Dilation (မျက်ဝန်းကျယ်ခြင်း) အတွက် လူကြီးသုံးပုံမှန်ပမာဏ
မျက်လုံးခွဲစိတ်ရာတွင် Mydriasis (မျက်ဝန်းကျယ်)အား စတင်ခြင်းနှင့် ထိန်းထားခြင်း – ခွဲစိတ်ရန်အတွက် irrigating solution(သန့်စင်ဆေးရည်) ကို လိုအပ်သလိုသုံးပါ။ မျက်လုံးအိမ်အတွင်း ထိုးမည့် ဆေးပမာဏ ဝ.၁ ml bolus dose ကိုအာနိသင်၁း၁၀၀,၀၀၀ကနေ၁:၄၀၀,၀၀၀ (၁၀ mcg/ml မှ၂.၅ mcg/ml) ထိရအောင် ဖျော်ပေးရပါမယ်။
ကလေးတွေအတွက် Epinephrine (အပီနပ်ဖရင်း ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
နှလုံးမခုန်တော့ခြင်းအတွက် ကလေးသုံးရန် ပုံမှန်ပမာဏ
အကြောဆေး သို့ လေပြွန်လမ်းကြောင်းတွင်းထိုးဆေး -ဝ.၀၁မှ ဝ.၀၃ mg/kg (ဝ.၁မှဝ.၃ ml/kg of ၁ : ၁၀,၀၀၀ ) ၃ မိနစ်ကနေ ၅ မိနစ်တစ်ခါ လိုအပ်သလို ထိုးပါ။.လေပြွန်ရှူဆေးပမာဏကို သန့်စင်ရည် ၁မှ ၂ ml မှာ ဖျော်ရပါမယ်။
အကြောဆေး – ကနေဦးပမာဏဝ.၀၁ mg/kg (ဝ.၁ ml/kg of ၁:၁၀,၀၀၀). ၃ မိနစ်ကနေ ၅ မိနစ်တစ်ခါ လိုအပ်လျှင် ထပ်ထိုးရနိုင်ပါတယ်။
လေပြွန်ရှူဆေး -ဝ.၁ mg/kg (ဝ.၁ ml of ၁ : ၁၀၀၀ ဆေးရည်). ဝ.၂ mg/kg လောက်မြင့်တဲ့ပမာဏဟာ ထိရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ၃ မိနစ်မှ ၅ မိနစ်ကြာတိုင်း ထပ်ပေးရနိုင်ပါတယ်။
သွေးလန့်ခြင်းအတွက် ကလေးသုံးရန် ပုံမှန်ပမာဏ
အကြောဆေး သို့ လေပြွန်ရှူဆေး။ ဝ.၀၁ to ဝ.၀၃ mg/kg (ဝ.၁ to ဝ.၃ mL/kg of ၁ : ၁၀,၀၀၀) ၃ မိနစ်ကနေ ၅ မိနစ်တစ်ခါ လိုအပ်သလို ပေးပါ။.လေပြွန်ရှူဆေးပမာဏကို သန့်စင်ရည် ၁မှ၂ ml မှာ ဖျော်ရပါမယ်။
အကြောဆေးထိုးခြင်း။ ။ ကနဦးဆေးပမာဏဝ.၀၁ mg/kg (ဝ.၁ mL/kg of ၁:၁၀,၀၀၀). ၃ မိနစ်ကနေ ၅ မိနစ်ကြာတိုင်းထပ်ပေးရနိုင်ပါတယ်။
အမြင့်ဆုံးဆေးပမာဏ ။ ။၁ mg သို့မဟုတ်၁၀ mL.
လေပြွန်ရှူဆေး။ ။ ဝ.၁ mg/kg (ဝ.၁mL of ၁ : ၁၀၀၀ ဆေးရည်). ဝ.၂ mg/kg လောက်မြင့်တဲ့ ပမာဏဟာ ထိရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။၃ မိနစ်ကနေ ၅ မိနစ်ကြာတိုင်းထပ်ပေးရနိုင်ပါတယ်။
ဓါတ်မတည့်ခြင်းအတွက် ကလေးသုံးရန် ပုံမှန်ပမာဏ
တစ်နှစ်သားမှ ၂နှစ်ထိ: ဝ.၀၅ မှဝ.၁ mL ကြွက်သားတွင်းထိုးသို့၁:၁၀၀၀ဆေးရည်ကို အရေပြားအောက်ထိုးရပါမယ်။ ပထမတစ်ကြိမ် ဆေးထိုးပြီးနောက် ၁၀ မိနစ်အကြာမှာ လက္ခဏာတွေက သိသိသာသာတိုးတက်မှုမရှိလျှင် ဒုတိယတစ်ကြိမ်ထပ်ထိုးလိုက်ပါ။
၂-၅ နှစ်: ဝ.၁၅ mL ကြွက်သားကြားသို့အရေပြားအောက်ထိုးရပါမယ်။
၆ – ၁၁နှစ်: ဝ.၂ mL ကြွက်သားကြားသို့အရေပြားအောက်ထိုးရပါမယ်။
၁၂နှစ်နှင့်အထက်: ဝ.၃ mL ကြွက်သားကြားသို့အရေပြားအောက်ထိုးရပါမယ်။ ပထမတစ်ကြိမ် ဆေးထိုးပြီးနောက် ၁၀ မိနစ်အကြာမှာ လက္ခဏာတွေက သိသိသာသာတိုးတက်မှုမရှိလျှင် ဒုတိယတစ်ကြိမ်ထပ်ထိုးလိုက်ပါ။
အရေပြားအောက် ထိုးဆေးပမာဏနောက်တစ်မျိုးကတော့ဝ.၀၁ mg/kg (ဝ.၀၁ ml/kg/dose of ၁:၁၀၀၀ဆေးရည်) ဝ.၅ mg ထက်မကျော်ရပါ။
အရေပြားအောက်ထိုးဆေးပမာဏ ။ ။ ဝ.၀၂၅ mg/kg (ဝ.၀၀၅ ml/kg of ၁:၂၀၀) တစ်ကြိမ်သာ ထိုးရန်။ ကြာချိန် ၈နာရီမှ ၁၂ နာရီကြာတိုင်း ဝ.၁၅ ml ထက် မကျော်ရပါ။
ရုတ်တရတ်ပြင်းထန်ပန်းနာရင်ကြပ်အတွက် ကလေးသုံးရန် ပုံမှန်ပမာဏ
တစ်နှစ်မှ ၂ နှစ်: ဝ.၀၅ to ဝ.၁ mL ကိုကြွက်သားကြားသို့၁:၁၀၀၀ ဆေးရည်ကို အရေပြားအောက်ထိုးရပါမယ်။. ပထမတစ်ကြိမ် ဆေးထိုးပြီးနောက် ၁၀ မိနစ်အကြာမှာ လက္ခဏာတွေက သိသိသာသာတိုးတက်မှုမရှိလျှင် ဒုတိယတစ်ကြိမ်ထပ်ထိုးလိုက်ပါ။
၂ -၅ နှစ်: ဝ.၁၅ mL ကြွက်သားကြားသို့အရေပြားအောက်ထိုးရပါမယ်။
၆- ၁၁ နှစ်: ဝ.၂ mL ကြွက်သားကြားသို့အရေပြားအောက်ထိုးရပါမယ်။
၁၂ နှစ်နှင့်အထက်: ဝ.၃ mL ကြွက်သားကြားသို့အရေပြားအောက်ထိုးရပါမယ်။ ပထမတစ်ကြိမ် ဆေးထိုးပြီးနောက် ၁၀ မိနစ်အကြာမှာ လက္ခဏာတွေက သိသိသာသာတိုးတက်မှုမရှိလျှင် ဒုတိယတစ်ကြိမ်ထပ်ထိုးလိုက်ပါ။
အရေပြားအောက် ထိုးဆေးပမာဏ နောက်တစ်မျိုးကတော့ ဝ.၀၁ mg/kg (ဝ.၀၁ ml/kg/dose of ၁:၁၀၀၀ဆေးရည်) ဝ.၅ mg ထက်မကျော်ရပါ။
အရေပြားအောက်ဆေးထိုးခြင်း: ဝ.၀၂၅ mg/kg (ဝ.၀၀၅ ml/kg of ၁:၂၀၀ဆေးရည်) ၈ နာရီကြာကနေ ၁၂ နာရီကြာတိုင်းကို ထိုးဆေးရည် ဝ.၁၅ ml ထက်မကျော်ရပါ။
၄ နှစ်နှင့်အထက်: ရှူဆေး: ၂၂၀ mcg (တစ်ကြိမ်ရှူ) ကိုတစ်ကြိမ်။ အနည်းဆုံးတစ်မိနစ်အကြာမှာ နောက်ဆေးရှူခြင်းကို ထပ်ပေး ရပါလိမ့်မယ်။ အနည်းဆုံး ၃ နာရီလောက်ထိကို နောက်ထပ်ဆေးများထပ်မပေးဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
မျက်ဝန်းကျယ်ရန်အတွက် ကလေးသုံးရန် ပုံမှန်ပမာဏ
မျက်လုံးခွဲစိတ်ရာတွင် Mydriasis (မျက်ဝန်းကျယ်)အား စတင်ခြင်းနှင့် ထိန်းထားခြင်း – ခွဲစိတ်ရန်အတွက် irrigating solution(သန့်စင်ဆေးရည်) ကို လိုအပ်သလိုသုံးပါ
မျက်လုံးအိမ်အတွင်းဆေးထိုးခြင်းကိုဝ.၁ ml bolus ပမာဏကိုအာနိသင် ၁ : ၁၀၀,၀၀၀ ကနေ၁:၄၀၀,၀၀၀ထိရောပြီး (၁၀ mcg/ml မှ၂.၅ mcg/ml) ထိုးရပါမယ်။
Epinephrine (အပီနပ်ဖရင်း ) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Epinephrine ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဆေးထိုးစက် – ဝ.၁၅ mg/ဝ.၁၅ m, ဝ.၃ mg/ဝ.၃ mL, ဝ.၁၅ mg/ဝ.၃ mL
အငွေ့ထုတ်စက်ဖြင့်ရှူရသောဖျော်ရည်၊ ရှူဆေး – ၂.၂၅ %
Solution, Injection: ဝ.၁ mg/mL (၁၀ mL); ၁ mg/mL (၁ mL)
ဖျော်ရည် ထိုးဆေး အား ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက်ပုံစံနှင့် – ၁mg/Ml
Epinephrine ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့်နီးကပ်နေပြီဆိုပါကလွတ်သွားသောအကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအားနှစ်ဆတိုးသုံးတာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။
Epinephrine injection. https://www.drugs.com/mtm/epinephrine-injection.html. 21/06/2016.
Epinephrine (Injection Route). http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/epinephrine-injection-route/description/drg-20072429. 21/06/2016